लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि वि’रोध गरेको भारतले नेपाललाई बल्ल पठायो यस्तो पत्र ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि वि’रोध गरेको भारतले नेपाललाई बल्ल पठायो यस्तो पत्र !
काठमाडौं । नेपालले भारतद्धारा अ’तिक्र’मित जमिन पनि समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि वि’रोध गरेको भारतले औपचारीक पत्र (नोट) पठाएको छ । असार १० गते नै आएको पत्रका बारेमा आज (विहिवार) औपचारीक जानकारी आएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयले यस वारेमा अहिले सम्म केही बोलेको छैन । तर विहिवार राष्ट्रियसभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बैठकमा सभापति रामनारायण विडारीले त्यसको जानकारी दिएका छन् ।
उनले लिम्पियाधुरा समेतलाई समेटेर जारी गरेको नयाँ नक्साको वि’रोध गर्दै नेपाललाई औपचारीक नोट पठाएको जानकारी दिएका हुन् । उनले असार १० गते नै नोट पठाएको बारे पनि समितिमा जानकारी दिएका छन् ।
भारतद्धारा अ’तिक्र’मित जमिन समेटेर नयाँ नक्सा जारी भएपछि भारतले तत्काल प्रतिकृया जनाउँदै मान्यता नदिने भनेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नै प्रतिकृया दिएका थिए । भारतीय मिडियाले सो घ’टनाक्रमलाई निकै निकृष्ट ढंगले प्रचार गरको छन् ।
उनीहरुले चीनको इसारामा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । भारतको वि’रोधको वावजुद नेपालले संविधान संसोधन गरी नयाँ नक्सालाई निसान छापमा पनि समेटेपछि भारतीय मिडिया थप निकृष्टतामा उत्रिएका छन् ।
नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुले पनि सार्वजनिक रुपमा नेपालको दा’बीलाई अस्वीकार गर्ने बताउँदै आएका थिए ।
यसअघि नोभेम्बर २०१९ मा भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपाली भूभाग परेको भन्दै नेपालले वि’रोध गरेको थियो । कूटनीतिक नोट पठाउनुका साथै दुई पटक वार्ताको प्रस्ताव पनि गरेको थियो, तर भारत तयार भएन ।
उनका अनुसार यस प्रकारका मानसिक रो’गबाट बच्न १० बजे सम्मको समयसीमा तोक्न आवश्यक छ । मानिसहरुले त्यसभन्दा पछाडि मोबाइल चलाउनमा रोक लगाए स’मस्या धेरै कम हुने उनको भनाइ छ । विशेषगरी शहरमा चौबीसै घण्टा बत्तीको मुनि बस्ने मानिसहरुका लागि मोबाइलको अधिक प्रयोगले ग’म्भीर स’मस्या निम्त्याउने गरेको पाइन्छ ।